Akavanzwa David Bowie Zviso Iwe Zvausina Kuziva Zvaive Mune Iyo Movie Labyrinth - iHorror
musha	chinotyisa	Akavanzwa David Bowie Anotarisana Newe Iwe Waisaziva Kuti Waive Mune Iyo Movie Labyrinth
Akavanzwa David Bowie Anotarisana Newe Iwe Waisaziva Kuti Waive Mune Iyo Movie Labyrinth
by iHorror Staff Munyori Dai 11, 2022
by iHorror Staff Munyori Dai 11, 2022 6,419 maonero
Kunyangwe hazvo Labyrinth isiri iyo inotyisa firimu… yaive imwe yeanodiwa angu pandakanga ndiri mudiki. Ini ndichangobva kuziva nezve zvese zvakavanzika David Bowie "Jareth" zviso izvo zvakavanzwa mukati memuvhi. Izvo zvakaita sekutsvaga izvo zvakavanzika Mickeys kuDisney World.
1. Chiso chekutanga chinoonekwa nekukurumidza apo Sarah paanopinda muLabyrinth (mushure mekutaura kune kadiki rebhuruu).
2. Mushure mekuchenesa tunnel, Hoggle naSarah vanokwira pamanera. Hoggle matanho pane isina kusimba rung uye inotsemuka. Sezvo ivo pavanoratidza rung kudonha, kumeso kwaJareth kunoonekwa pakati pematombo.
3. Mushure mekutaura kune akachenjera, Sarah naHoggle vanofamba nepakati penzvimbo yeredge. Chiso chaJareth chiri pasi, kuruboshwe rweobelisk.
4. Muchiitiko mushure mekunge Sarah asunungura Ludo, Hoggle anoonekwa achifamba uye achigunun'una, "Haambofa akapfuura nemuLabyrinth." Chiso chaJareth chinooneka kumusoro kwekona yekuruboshwe.
5. Pakutanga kwechiitiko apo Jareth anopa Hoggle peach ine muchetura.
6. Chiso chaJareth chinogona kuvonekwa paBog of Eternal Stench madziro, mushure meiyo ledge yaputsika.
7. Musango, chiso chaJareti chinooneka pakati pemiti mushure mekunge vabva muBog of Eternal Kunhuwa.
Tarisa zviso zvinomwe zvakavanzika zvakavanzika zvaJareth mukati Labyrinth: